Imikhiqizo Yokuhlanza Imoto Engcono, Eco Car Wash Supplies | I-OPS Technology
Ikhaya / Imikhiqizo
Umkhiqizo we-Eco Car Wash
Kuyinto I-Touchless Car Wash Powder enamandla, ukusebenza kahle kakhulu kususa ukungcola, ukugcoba, i-shellac, i-ornithocopros kanye nokunye, ukushiya imoto ebonakalayo ihlanzekile, igcina ingcina ye-wax. It inikeza ikhono lokuhlanza elihle kakhulu, lichitha ngokushesha amanzi ashisayo noma abandayo. Indawo eco-friendly! Kuhle ukugeza izimoto ezihlukahlukene.
Asikho isidingo sokuwasha kanye nesiponji ukusula, Ukugcina izindleko zamanzi nezisebenzi!
Ukugeza izimoto ezingaphezu kuka-40 kungathatha isikhwama esisodwa kuphela esingu-500g powder.
Gwema ukukhahlela ngesikhathi sokugeza imoto.
Nciphisa imoto ukugeza ukukhulelwa kwamanzi, indlela entsha yokuvikela imvelo
I-SGS, i-TUV, i-CNAS evunyelwe i-Eco-friendly Car wash powder.
Umkhiqizo Omhle Wokuhlanza Amagagasi Ezimoto
Ukuhlanza ihabhu lesondo ayidingi ikhanda le-sprinkler elisezingeni eliphezulu kanye nesibhamu samanzi, ukuhlunga ngesandla kungenzeka futhi kuhlanzekile.I-ring ye-OPS ye-steel self-cleaning agent inezimo ezikhethekile emafutheni amafutha, i-metal oxides, i-brake powder, i-powder yensimbi, i-carbon deposition, njll, efanelekile ukuze kube nezindawo ezihlukahlukene ze-wheel hub!
Ukuthengisa okuqondile ngumenzi, qinisekisa izimpahla eziqinisekisiwe
Ukuqedwa okusheshayo kanye ne-foam kuyiningi.
Iqukethe izinhlobo ezihlukahlukene zama-surfactants, ezingashuthukiswa emanzini ngokushesha.
Imikhiqizo yokuhlanza izimoto ezingasetshenzisiwe, hhayi ukuthatha umonakalo empilweni.
Geza bese usula kungasusa ngokushesha ukungcola, okulula futhi okulula.
Isetshenziswe ngokubanzi emotweni ehlukahlukene yemoto noma yeloli
Izimpahla Zokuhlanza Izangaphakathi Zemoto
Ukusebenzisa i-enzyme yemvelo kanye nemvelo ukuze kukhishwe amafutha ase-citrus okungumkhiqizo ongasetshenziselwa ukukhiqizwa kwemvelo ngaphandle kokuhlala, kusebenza ngokuphumelelayo ukususa zonke izintambo ezinenkani ngaphakathi nangaphandle kwemoto noma indlu enemiphumela emihle yokuhlanza ukususa iphunga elikhethekile.
Susa ngokujulile ukungcola, ulethe umoya omusha wesikole noma indlu.
A kancane Pighter yellow powder, umkhiqizo eco-friendly ngokugcwele
500g powder ehlanganiswe esikhwameni esisodwa se-foil noma ibhokisi leplastiki.
I-detergent ye-enzyme ye-orange ingahle ilingane namanzi okuhlanza we-500ml!
Gxila ekuhlanzeni i-powder kuyindlela efanele yokuhlanza ukuhlanza
Kulula ukuyisebenzisa futhi kulula ukugcina, uyingcweti yokuhlanza okuhle!
I-Compact Car Windshield Amathebhulethi okuhlanza ama-Effervescent, ubuchwepheshe obuphambili kakhulu bokukhiqiza, ifomula elithuthukisiwe yamaphilisi e-washer. Amaphilisi okuhlanza ama-effervescent angashintshaniswa ne-4L ye-windshield i-wiper fluid, Ngokusho komthamo ojwayelekile we-tank storage storage, ingxenyana yamanzi, engathatha isikhundla futhi ibe mkhulu kunama-glass glass yendabuko!
Susa ngokuphumelelayo zonke izinhlobo zezinti ezinenkani ezinomphumela omuhle kakhulu.
Amaphilisi e-car-windshield ama-effervescent angasetshenziselwa imishini, ayikho i-bleach yamakhemikhali.
Kulula kakhulu ukususa ifilimu yamafutha weglasi nokulandelana kwezinambuzane.
Lo mkhiqizo i-agent yokuhlanza ephezulu yokusebenza.
Ingasebenzisa kuzo zonke izinkathi, ikakhulukazi kuBusika.
Dissolve ngokuphelele, akekho resisial bese isicelo zonke izinhlobo zezimoto.
Amathebhulethi we-All-In-One Ama-Effervescent
Sebenzisa imali encane ekuhlanzeni ekhaya imikhiqizo ene-Multifunctional Effervescent Spray Cleaner Set! Lawa ma-capsule amangalisayo azosiza ngokushesha, asheshe futhi asuse amabala ezembatho, amabala wekhishi, amabala amathayela okugezela, ifenisha yangaphakathi, izithunzi zamalambu, okhaphethi bangcolile nokunye okuningi ngemizuzu embalwa nje! ukushiya indlu yakho noma imoto icwebezela kahle!
spray futhi uhlanze, ukusebenza kahle ukususa noma yiziphi izinhlayiya.
Hlanzeka ngokujulile futhi ugcine isikhathi eside.
Kanye nokuvimbela amabhaktheriya ekuzaleni emkhathini wendawo noma emotweni.
Sebenzisa ama-enzyme ephilayo ukuze uhlakaze izinti ukuze ufeze umphumela ohlanzekile.
With more eco-friendly, ephephile non-toxic!
Ayikho i-bleach yamakhemikhali engasetshenziselwa ukuhlanza ama-pet stains ngaphandle kokulimala.